सक्रिय संक्रमित २५ हजार नाघिसके , के अब राष्ट्रव्यापी लकडाउन हुन्छ ? - Himali Patrika
सक्रिय संक्रमित २५ हजार नाघिसके , के अब राष्ट्रव्यापी लकडाउन हुन्छ ?
हिमाली पत्रिका २२ असोज २०७७, 7:39 am
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको इन्सिडेन्ट कमाण्ड सिस्टमले ७ असोजमा निष्कर्ष निकाल्यो, ‘सक्रिय संक्रमितको संख्या २५ हजार नाघ्यो भने लकडाउन गर्नुपर्छ ।’
तर, सरकारका प्रवक्ता मन्त्री ज्ञवाली अनलाइनखबरसँग भन्छन्, ‘अहिले दैनिक भेटिने संक्रमितमा आधाभन्दा बढी काठमाडौं उपत्यकाकै छन्, आइसोलेसन वार्डहरु पनि भरिँदै गएका छन् । यसका लागि विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ला । तर, लकडाउन समाधान होइन ।’